500 km atsinanan’i Sambava : misy andro ratsy ahina hivadika ho rivodoza | NewsMada
500 km atsinanan’i Sambava : misy andro ratsy ahina hivadika ho rivodoza
Misy faritra andro andro ratsy ahina hivadika ho rivodoza ao avaratry ny Nosy Mascareignes. Mety hivoatra izany ao anatin’ny 24 ka hatramin’ny 48 ora manaraka, araka ny fanazavan’ny teknisianina mpamantatra ny toetry ny andro, omaly hariva. Omaly tamin’ny 3 ora hariva, tany amin’ny 500 km atsinanan’i Sambava no nisy ny foibeny. Amin’ny herinandro ambony ho avy iny vao mety hivadika ho rivodoza izy ary kely ny fanahiana amin’ny mety hidirany amin’ny morontsiraka malagasy. Ireo Nosy maromaro manakaiky antsika no voakasika mivantana amin’io faritra andro ratsy mety hivadika ho rivodoza io.
Raha mihamafy ny rivodoza ka mahazo hery vao mety hipaka amin’ny tapany Atsimo Atsinanan’ny Nosy iray manontolo izany. Manara-maso akaiky ny fivoaran’ity andro ratsy ity ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro eny Ampandrianomby.
Amin’izao fotoana izao, mitsoka 20 km isan’ora ny rivotra amin’ny tapany avaratra andrefana sy andrefan’ny Nosy.
Momba ny toetry ny andro anio, ny maraina, hahazo orana malefaka i Sava sy Analanjirofo. Hanorana tandrifin-drahona ny any Diana, Sofia, Boeny, Melaky, miampy an’Atsimo Atsinanana sy Anosy. Amin’ny faritra sisa rehetra, ho maina ny andro. Ny hariva, hitohy ny orana malefaka any Sava. Hanorana tandrifin-drahona ny faritra Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana sy Anosy. Hifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro amin’ny ilany atsinanan’ny avofoan-tany, ny any Analanjirofo sy Atsinanana. Hahazo orana tandrifin-drahona harahin-kotroka ny faritra sisa. Ho an’ny maripana, 18 ny ambany indrindra eto Antananarivo raha 29 ny ambony indrindra, araka ny filazan’ny eny Ampandrianomby.